BOQOSHAADA COCKEREL (DIGAAGGA): SAWIR IYO SHARAXAADDA MEESHA AY KU KORAAN, GOORTA LA URURIYO, INTEE IN LA KARIYO, SIDA LOO KARIYO - MUSHROOMS
Boqoshaada cockerel (digaagga): sawir iyo sharaxaad
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee boqoshaada on meerkeena waxaa jira hal nooc oo la cuni karo, taas oo loo yaqaan kaliya oo loo yaqaan pickling mushroom. La kulan - waa jardiinooyinka. Waxay heleen magaca asalka ah oo ay sabab u yihiin xaqiiqda ah in ay dhadhamiyaan hilibka digaaga. Marka xigta, waxaan kuu sheegi doonnaa sida caajisku u eegi doonaan, meesha ay ku koraan, sida loo soo ururiyo iyo sida ugu wanaagsan ee loogu diyaar garoobo jiilaalka.
Magaca sayniska ee baranbaradu waa furaha guud. Waa wakiilka kaliya ee noocyada yurub ee fungi ee cirridka Rozites, oo mararka qaarkood lagu daro Web circa. Magaca Laatiin waxaa loo yaqaan 'Rozites caperatus'.
Waxaa sidoo kale jira isku mid u dhigma - boqoshaada digaagga, iyo tiro naaneys ah oo nasiib u leh in dadka deggan gobollada kala duwan ay bixiyaan:
Waxaa badanaa la yiraahdaa "safka cawlka", laakiin dhab ahaantii waa noocyo gebi ahaanba ka duwan. Gray (Portentosum Tricholoma) waxaa iska leh qoyska Ryadovkov waxaana uu leeyahay midab madow ama midab madow; Intaa waxaa dheer, lugta oo aan lahayn giraan.
Ma taqaanaa? Magaaladda Ofenpass ee ku taala isboortiga Swiss ee ku yaala xajka boqoshaada ayaa leh kor u kaca qaybaha kubada cagta - 800 m iyo 500 m ballaaran. Asal ahaan, meeshan oo dhan waxaa degan meeshiisii, oo qarsoonaa dhulka hoostiisa oo ka kooban shabakad ballaaran oo ah hyphae (filaments).
Cockerels waa la cuni karo, sidoo kale, boqoshaada nafaqo leh iyo dhadhan fiican leh. Galbeedka Yurub waxaa loo tixgeliyaa in la cuno.
Sidaa darteed aad fikrad cad u leedahay hadiyaddan kalluunka, halkan waa sharaxaad ku saabsan sifooyinka nafleyda ee jirka miro-haweenka.
Baro naftaada noocyada la cuni karo ee boqoshaada.
Koofiyaddu waxay u egtahay sidaan:
Horumarka bilowga ah, waa midab, sida ukun digaag ah, oo geesaheeda hoos u dhigo oo iska diiday.
Koraaya, waxay noqoneysaa mid isku dhafan, oo leh geeso la kiciyey, boodh yar ayaa u muuqda kor. Haddii xilli-dugsigu kulul yahay, cidhifyada furan ee furka.
Bareecada qaangaar ah, maqaarku wuxuu noqdaa mid xiiran oo xajin, oo la daboolay ubax oo ah budada cad.
Markuu koro, midabka koofiyadu wuxuu ku kala duwanaan karaa silvery cad ilaa jaale-casaan-bunni.
Dhexdhexaadiyaha madaxda ee baranbaradu waa 5 ilaa 12 sentimitir.
Lakabka gudaha ee jidhka miro ayaa u eg sidan:
Joogitaanka cufan, cufan, ayaa leh faybar.
Midabku waa mid hurdi ama cufan.
Marka midabka la gooyey waxba isma bedelin.
Karaashu waa mid wacan, likaha.
Dhadhanka waa sida digaag.
Waxaa dhici karta in ay saameynayso gooryaanka.
Tigidda fungus iyo fiirin korteeda, waxaad arki kartaa tiro badan oo khafiif ah oo ka mid ah qalabka isboortiga ku xiran lugta. Midabka taargadu wuxuu isbeddelaa waqtiga:
Caddaan ama huruud ah - fangas dhallinyaro ah.
Ka dib marka la soo bandhigo daboolka, taargadu waxay noqdaan jaalle.
Inta lagu jiro foornada feerka, midabka taargadu wuxuu isbeddelaa jaalaha ah ilaa rusty.
Waa dabiiciga qoyan ee lakabka musqusha ee la cuno oo ka soocaya asxaabta sunta ah, taarigooduna si joogto ah u caddaan.
Cudurka ayaa ah oches ama elips. Xabbad laga bilaabo guntimaha musqusha ee ka dillaacday ayaa ka baxaya hollada gacmaha.
Lugtaan mushahani waa qayb muuqata.
Waxay leedahay qaab cylindrical ah; waxaa sii dheeraa salka, waxay u egtahay lugta Amanita.
Waxaa jira cortina (xuubka), taas, marka jabaqday, waxay sameeyaan giraan ku habboon lugta.
Dusha sare waa silcin salka ah iyo qolfaha dhuuban ee qaybta sare.
Midabka sare ee lugaha kor ku xusan waxaa ka mid ah jaale huruud ah, qaybta hoose ee midab aad u kacsan.
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro kobaca firfircoon, fungi waxaa sabab u ah turgor (cadaadiska gudaha) ee ay gaareen xilligan 7 atlospheres, awood u gali ma aha oo kaliya xayndaabka la taaban karo, laakiin sidoo kale birta ama marble. Heerka cadaadiska isku midka ah ayaa lagu duraa taayirada gaadhiga 10-tone ah.
Halka ay ku koraan iyo marka aad soo ururin karto
Daboolka xawliga - xajmiga baahsan. Waxaa laga heli karaa wadamada Yurub iyo Aasiya, iyo sidoo kale Kanada, Maraykanka, iyo Japan. Mushaharkan ayaa aad u jecel xaaladaha cimilada ah ee cimilada ee Lapland, iyo sidoo kale tundra Ruush, halkaas oo ay ku nool yihiin dhirta kalluunka ah ee dhoobada iyo marshesyada (kuwaas oo magaca kale ay yihiin mas'uulka). Swamps of Belarus sidoo kale sidoo kale ay jecel yihiin.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la ogaado boqoshaada koraya ee Volgograd, Saratov, Leningrad, Kaliningrad iyo Bashkiria.
Badanaa waxay ku yaalaan gobollada buuraleyda, halkaas oo laga helay meel sare oo u jirta ilaa 2 kun oo mitir. Xannuunada ay jecel yihiin waa dhanaan, qoyan, podzolic, oo ah xayawaan badan oo isku dhafan. Sidoo kale arrimahaan inta badan waxay ka kooban yihiin lingonberries iyo blueberries, sidaas darteed haddii aad ku dhufatid tuugo ka mid ah duurka sida, waxay ka dhigan tahay in roosters meel u dhow. Waxay koraan warshad ballaaran, kooxo badan oo isku dhafan. Waqtiga ay ururinta - laga bilaabo maalmaha ugu horeeya ee July ilaa dhaxan ugu horreeya. Waxaa ugu wanaagsan in la ururiyo qoob-ka-shaqeeyayaasha oo ay weheliyaan soo-saarka soo-saarka leh ee khibrad leh oo awood u leh in ay kala soocaan boqokaan kuwan ka soo jeeda kuwa sunta ah iyaga oo la mid ah iyaga. Ku saabsan farqiga u dhexeeya ciyaalka la cuni karo iyo fungus sunta - akhriya hoosta.
Maxay tahay boqoshaada la isku moodi karo
Koofiyadu waxay ku wareersan tahay boqoshaada lakabkoodu yahay Spiderweb genus. Si kastaba ha ahaatee, la cuni karo waa farqi aad u muhiim ah - marwalba waa giraan buuxa oo lugta ku jirta, kuwaas oo kuwa aan sunta lahayn aysan haysan. Waxaa laga arki karaa lugta oo keliya hadhaaga yar ee sariirta. Mararka qaarkood ragga waxaa lagu jahwareeriyaa qoyaan ama miro.
Soo ogow waxyaabaha uu ku yaalo hantida dawada ee cayayaanka.
Si aad u kala saari karto kuwa isku dhafan, kuwan waa calaamado muhiim ah:
Cockerel silvery-white si huruud ah-casaan-bunni Ku lifaaq lugta, midabka duurjoogta Saldhigeedu ma laha dabool yar, wax yar ka yaraato saldhigga.
Amanita White, wuxuu leeyahay ur xun Kala soocay asliga ah, casaan fudud Saldhiga foomka ee tuber, oo ku wareegsan cheholchik. Waxay leedahay gogol ballaaran, guntama
Cillad cufan Midab cad Laga soocay lugaha, cad Ku bar baro salka, iyadoo leh cheholchik. Waxaa jira giraan foorno oo cad
Sida loo isticmaalo karinta
Dumarka ku jira qorshaha gastronomiska waa mid caalami ah, waa la cuni karaa nooc kasta.
Boqolaalkani waxay leeyihiin dhadhan gaar ah, jilicsan, dhadhan gaar ah oo iyaga u gaar ah. Thanks to dhadhan dhadhanka, suxuunta ka soo horjoogsanayaan waa xusuusin digaag jilicsan. Qalabka nafaqada leh, ma aha kuwo ka gaabinaya xitaa champignons.
Sidoo kale akhri sidoo kale sida kor loogu qaado boqoshaada guriga iyo waxa isticmaalka isticmaalka boqoshaada.
Cajiibka qamaarka ayaa lagu muujiyay xaqiiqda ah in loo diyaargaroobi karo siyaabo kala duwan:
Marinate xilliga jiilaalka.
Si aad u qallajiso.
Codso sida qayb ka mid ah solyanka.
Waxay udhexeeya si isku mid ah khudaarta, hilibka, dhirta. Waxa ugu fiican ee dhadhanka ah waa furaha fangaska dhalinyarada. Haddii fangaska uu jir yahay, oo lugta la jilcan yahay, way ka fiican tahay in la diido, xitaa haddii aysan ahayn duufaan.
Waa imisa cuntada
Qaar ka mid ah boorsooyinka ayaa jecel inay karkariyo karkarin ka hor inta aan la shiilin ama la xoqin. Dadka jecel kaynta kale waxay doorbidaan inay isku karsadaan. Labada xulasho ayaa la aqbali karaa haddii boqoshaada ay ku koraan aag deegaan u ah. Haddii aad doorato ikhtiyaarka kowaad, markaa waxaad u baahan tahay inaad ku sameyso 3 tallaabo, mar kasta oo biyaha ku shubo oo ku shubo mid cusub. Hana isku karsaarin muddo dheer - 5 daqiiqo ayaa ku filan mar kasta. Mid ka mid ah sababaha loogu talagalay in lagu karkariyo boqoshaada dhowr jeer ayaa cammuudda ku dhegay taarikhda.
Waa muhiim! Waxaa fiican inaadan soo qaadin boqoshaada waddooyinka iyo dhirta shaqada. Inkasta oo muuqaalka cunnida cuntada leh, joogitaanka walxaha waxyeelada leh ee ku jira waa la damaanad qaadayaa.
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa laba raashin ah oo salineed ah:
Habka qabow - wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isku daydo saxanka aan ka horeyn 40 maalmood.
Habka ugu fiican waa in la cuno midig kadib marka qaboojiyaha qaboojiyo.
Hababka labadaba waxay ku siin doonaan boqoshaada cufan iyo gaajo leh, taas oo noqon doonta cunto fudud ama wax lagu cuno suxuun kala duwan.
Saliida Caanaha qabow
Liiska waxyaabaha loo baahan yahay iyo maacuunta:
10 kg oo lab ah,
1 kg oo cusbo ah
1 bac ah digir macaan,
20 g ubaxyada ubaxyada,
dhawr dallado ee dill leh abuur,
biyo qabow - sida loo baahdo
foosto foorno leh goobo hoos yimaada harqoodka,
Waa muhiim! Haddii aad ka hesho gudaha weelasha boqoshaada, xitaa qadar yar oo caaryaal ah, boqoshaada xaalad kasta lama cuni karo. Way ka fiican tahay in la tuuro.
First of dhan, foosto dahab ah ayaa la cufan la juniper si ay u burburiyaan sheyga aan loo baahnayn.
Waxaa lagama maarmaan ah in la dhaqo boqoshaada iyo ku shub layers ee foosto, pre-cusb kasta lakab. Si arrintan loo sameeyo, qaado 2/3 ee milix wadarta.
Musqul duuduub biyo qabow.
Ku dabool waxyaabaha ku jira foostada leh goobo alwaax ah.
Ku dhaji goobada cadaadiska.
Xumbadu waxay soo muuqan doontaa usbuuca dhexdeeda si loo saaro.
Ka dib markii salting toddobaadle ah, biyaha waa in si buuxda u miiray, gelin boqoshaada weel dabacsan oo biyo raaci foosto.
Qeybta hoose ee foosto u dillaa.
Ka dhig boqoshaada maro lakabyo oo dabool leh milixda haray. Kalluunka iyo geedo yaryar ayaa u baahan in la hagaajiyo.
Ku shub biyo qabow oo nadiif ah, daboolo goobada oo dul saar cadaadiska.
Salting waa in lagu kaydiyaa daboolka qabow ama maqaasiinka.
Saliida saliida ah waxay u kulul yihiin (dhakhso)
Waxyaalaha iyo Dhacdooyinka:
10 kg oo ah boqoshaada,
150 garaam oo cusbo ah
3 litir oo biyo ah
4-6 jeer oo ah digirta allspice,
3-5 dhoobo foorishka,
7-10 peppercorns madow,
Baay caleen (1 xabbo oo kijis ah),
3-5 xabo oo toon ah (qayb ka mid ah 1 koob),
5 siddeed basal (1 qaybood),
gasacadaha (1 l, 0.5 l),
Waa muhiim! Laguma talinayo in lagu karkariyo caleemaha marinade, haddii kale, halkii dhadhanka, waxay ku dari doontaa qadhaadh dhan qashin dhan.
Boorash laga duubay:
Si tartiib ah u raaci kalluunka si aad uga biyo raacisid biyaha.
Ku rid digsi oo karkari 3 jeer 5 daqiiqo, adoo badalaya biyaha cusub.
Iska tuur tuumbada oo ha daadin biyaha.
Karkari 3 litir oo biyo ah, ku shub milix iyo dhir udgoon, ka dibna isku dar oo ku shub likaha.
Kareemka karkari ee marinnada 5 daqiiqo.
In barmiil jeermiska looga dhigo toon, basasha iyo qaxwadu ka baxaan dhinaca hoose.
Isku-daa-daa-marinta diyaarka ah ee diyaarka ah ee qasacadaha, oo ku daraya marinade.
Is dabajooga daboolka qajka.
U ogolow in aad qaboojiso, ka dibna ku nadiifi meel qabow.
Baro sida loo kalluumeeyo boqoshaada jiilaalka.
Maqnaanshaha Mushta ee jiilaalku had iyo jeer waxa loo tixgeliyaa raaxo. Waxa kaliya oo muhiim ah in la xasuusto in si madax bannaan uruurinta iyo goosashada boqoshaada aan khatarta ah khatar u ah caafimaadka oo keliya, laakiin sidoo kale nolosha. Si aad uga hortagto qalad halis ah markaad uruurineyso cockerels, waxaad qaadataa picker mushqul leh oo aad la socotid.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Mushrooms 2020